Fiatrehana ny Can 2022: tsy mbola fantatra ny mariky ny fanamian’ny Barea - ewa.mg
News - Fiatrehana ny Can 2022: tsy mbola fantatra ny mariky ny fanamian’ny Barea
Tsy milamina mihitsy ny
mahakasika ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Tsy misy
fandaharana maty paika na amin’ny fanomanantena na amin’ny kianja
na amin’ny fanamiana hoentina miatrika ireo
Nivoaka tao amin’ny
tambajotran-tserasera, omaly talata, fa ny marika “Macron” no
nahazo ny fifanarahana amin’ny fanamiana hoentin’ny Barea de
Madagascar miatrika ireo fihaonana miandry azy, amin’ity taona 2021
ity. Nanambara kosa ny avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny
baolina kitra (FMF), fa tsy mbola misy nahazo izany hatreto fa vao
eo am-panaovana ny tombany sy fijerena ireo masontsivana rehetra ny
kaomisiona misahana izany. Ampahafantarin’izy ireo amin’ny fomba
ofisialy izany rehefa tontosa ny zava-drehetra. Tsiahivina fa efa
tapitra tamin’ny 27 avrily 2020 ny fiarahana tamin’ny marika
Garman, izay nisaloran’ny Barea de Madagascar, tany amin’ny
fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), notanterahina tany
Taorian’izay, nisy ny fanaovana
tolo-bidy iraisam-pirenena, ny 7 febroary 2020 ny amin’izay
hampiakanjo ny Barea de Madagascar ka marika telo no nifaninana dia
ny Cercle by Ted, ny Macron ary ny Errea. Taorian’ny safidy sy ny
tombana, lany ny Cercle by Ted, saingy tsy neken’ny rehetra izany.
Anisan’ireo nitsipaka io marika io i Abel Anicet, kapitenin’ny
Barea de Madagascar. Teo koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny
ekipam-pirenena malagasy. Nanakiana mafy io marika io ry zareo,
noho izy tsy malaza eran-tany, raha sehatra eo amin’ny
Tsy maintsy ho fantatra mialoha ny
lalao hikatrohana amin’i Etiopia, ny 27 marsa ho avy izao izay
marika hoentin’ny Barea de Madagascar.
L’article Fiatrehana ny Can 2022: tsy mbola fantatra ny mariky ny fanamian’ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 24/02/2021
Loza tsy nahy sa niniana natao…: kilan’ny afo ny fiara 4X4 an’ny pasitera
“Noho ny hetraketraka”, hoy ny sasany. “Niniana natao…”, hoy ny hafa. Tsy fantatra mazava izay tena antony niteraka ny loza, nahamay ny fiara 4X4 an’ny mpitandrina ny Fjkm Ziona Imerintsiatosika, afakomaly alina. Ny hita, kila firehitra ny tapany aorian’ilay fiara. Efa mandeha izao ny famotorana…Kilan’ny afo noho ny hetraketraky ny sasany ny fiara 4×4 Rexton an’ny mpitandrina Fjkm Ziona Imerintsiatosika, ny alin’ny alahady 16 hifoha ny alatsinainy 17 mey 2021 tokony ho tamin’ny 12 ora sy 30 minitra. Nipetraka teo an-tokotanin’ny fiangonana mifefy tamboho io fiara io ka olona no niantso ny pasitera teo am-bavahady fa nirehitra ny fiangonana. Hatairana ny an’ity farany nivoaka hijery ny zava-nisy kinanjo efa nirehitra ny tapany aorian’ny fiarany. Nifamonjena avy hatrany ny afo ary voafehy izany ora vitsy taorian’ny loza. Na izany aza, may tsy nisy noraisina ny faritry ny « malle ». Tetsy an-kilany, tsy niseho tava, tsy nitonona anarana ary tsy hita nandritra io fotoana nisehoan’ny fifehezana ny afo io ilay nampandre. Heverina fa mbola teo amin’ny manodidina ny nahavanon-doza fotoana fohy taorian’ny nandorana ny fiara.Nakana alika mpitsongo dia…Rehefa maty ny afo, tsy nipetra-potsiny ny mpitandrina voakasiky ity fandorona fiara ity fa niantso avy hatrany ny zandary tao an-toerana. « Niroso tamin’ny fakana alika mpitsongo dia ny niharam-boina, saingy tsy nahitam-bokany izany », hoy ny lehiben’ny kaompania Arivonimamo, kapiteny Manampy Chantol. Fanampin’izay, ahina ho misy disadisa ao amin’ny samy mpiara mivavaka sasany ka niteraka izao loza izao, raha ny nambaran’ny mponina teny amin’ny manodidina. Mitohy kosa ny fanadihadiana amin’izao fotoana ka andrasana ny tohin’izany.Tsiferana RandriatianaL’article Loza tsy nahy sa niniana natao…: kilan’ny afo ny fiara 4X4 an’ny pasitera a été récupéré chez Newsmada.
HERISETRA SY TAMBABE :: Lehilahy enina voarohirohy ho naha- faty olona tamin’ny tsindron’antsy
Lehilahy enina no voasambotry ny zandary taorian’ny fanadihadiana tamin’ny tranga fifanindronana antsy nifanaovan’ny andian’olona, tany Ambakirano Ambilobe, izay nahafatesana olona efatra, ny herinandro lasa teo. Olona vitsivitsy teo an-tanàna sy andian’olona avy any Ambilobe ireto nifanindrona antsy. Samy nisy voarohirohy sy voasambotra ny avy amin’ny an-daniny sy ny an-kilany. Lehilahy telo avy. Tsiahivina fa raharaha fananantany no niatombohan’ ny herisetra mahery vaika, tamin’ny talata 4 desambra lasa teo. Nisy olona avy any Ambilobe tonga tany Ambakirano nilaza fa hijery ny tany efa novidian’izy ireo, taona maro lasa izay. Nisy fifamaliana teo amin’izy ireo sy ny fianakaviana tompon’ny tany. Niafara tamin’ny fifanindrona antsy izany, ny ampitson’io. Voalaza fa samy nivimbina antsibe ny an-daniny sy ny an-kilany. Nidina tany an-toerana ny mpitandro filaminana. Nosamborin’iretsy farany avy hatrany ireo tratra nitazona antsy misy ra. Nitohy ny fikarohana ka izao niafara tamin’ny fahatrarana lehilahy enina izao. L’article HERISETRA SY TAMBABE :: Lehilahy enina voarohirohy ho naha- faty olona tamin’ny tsindron’antsy est apparu en premier sur AoRaha.
Sisfm: hatao ny 5 sy 6 aogositra ny filankevi-pirenena
Ny 5 sy ny 6 aogositra izao no hanatanteraka ny filankevi-pirenena ny sendikan’ny infirmiera sy ny mpampivelona eto Madagasikara (SISFM). Araka ny andininy faha-13 ao amin’ny sata sy ny taratasy laharana 016/21/BNSISFM no hahafahana miantso ny biraom-paritra sy ny mpitarika ny rantsana eny anivon’ny distrika hiatrika izany filankevi-pirenena izay hatao eto Antananarivo izany.Hakana ny hevitr’ireo mpiasan’ny fahasalamana toy ny mpampivelona sy ny infirmiera any amin’ny faritra ny tanjona. Hanangonana ny fitarainana sy ny hetahetan’izy ireo amin’ny fampandrosoana ny sehatry ny fahasalamana eny ifotony.Anisan’ireo miantsehatra any amin’ny tany lavitra andriana ny mpampivelona. Miantoka ain’olona maro amina tanàna maromaro izy ireny kanefa indraindray mahatsiaro ho ankilabao na amin’ny fitaovana hiasana na amin’ny fandriampahaleman’ny asa.Ny hevitra voaangona amin’ny filankevitra nasionaly no entina amin’ny fihaonambem-pirenena hatao ny 23 ka hatramin’ny 27 aogositra.Amin’izany no hanapahana ny hevi-dehibe entina sy ny fanolorana ireo volavolan-dalàna ho fanatsararana hatrany ny fiainan’ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny sehatry ny fahasalamana miainga eny ifotony.Zo voafaritra sy arovan’ny lalàmpanorenana sy ireo lalàna iraisam-pirenena ny zo sendikaly ka tsy misy antony tokony hampiroaroa saina ireo mpizaika izany raha ny fanentanana ataon’ny mpitarika azy ireo.Tatiana AL’article Sisfm: hatao ny 5 sy 6 aogositra ny filankevi-pirenena a été récupéré chez Newsmada.
Ny lalàna dia lalàna; mafy ny lalàna, nefa izay no lalàna. Inona koa? Misy ny fitenin’ny sasany hafahafa hoe: natao hodikaina ny lalàna, ho an’ny hafa ny lalàna. Amin’izao fitondrana izao, anisan’ny fanamby ny hoe fanjakana tan-dalàna. Ao anatin’izany ny vahoaka. Ny vahoaka no fanjakana? Na ny mpitondra no manjaka, ny vahoaka: ny vahoaka no mahatonga ny mpitondra manjaka. Mby aiza?Matoa atao fanamby ny hoe fanjakana tan-dalàna, tsy tan-dalàna izany hatramin’izay na hatramin’izao. Tsy hita loatra izay hoe tan-dalàna izay tamin’ny fitondrana nifandimby? Tsy mahagaga raha tsy tan-dalàna ho azy koa ny vahoaka. Tsy misy firy ny ohatra tahafina, fa avy any ambony ny ohatra. Izay mahitsy no afa-kanitsy, izay manara-dalàna no afa-kampanara-dalàna, izay marina no afa-kanamarina…Tsy mbola mety ho kolontsaina ny fanarahan-dalàna? Fomba fiaina izany, mandeha ho azy… Saika mbola tahotra mpitandro filaminana ny fanarahan-dalàna ho an’ny sasany, tahotra fitsarana sy fonja na lamandy. Raha tsy tahotra an’izany rehetra izany ny fanarahan-dalàna, henatra sao afa-baraka raha hita sy fantatry ny hafa. Hany ka tsy mety ho fahamendrehana amin’ny maha olona ny fanarahan-dalàna.Vokany, mifanohitra amin’izany: fahamboniana ho an’ny sasany ny tsy fanarahan-dalàna, fiavahana mitaha amin’ny hafa. Mety ho lasa fireharehana sy fisetrasetrana aza izany: tsy miraharaha na inona na inona afa-tsy ny lalàna ihany, tsy matahotra na iza na iza. Santionan’ny mahalalim-paka ny fahazarana sy tarazo ratsy amin’ny tsy fanarahan-dalàna izany rehetra izany, mahahenika ny maro, efa ho lava…Ahoana àry no hahatongavana amin’ny fanarahan-dalàna ho zary kolontsaina? Fomba fiaina hanajan-tena sy hanajana ny hafa amin’ny maha olona: tsy atao tsy fidiny, tsy mampiferotra aina. Mila fanazavana sy fandresen-dahatra mandrakariva ny maha zava-dehibe ny lalàna? Takina koa ny ohatra velona hotahafina amin’ny fampiharan-dalàna, ny fanasaziana… Mby aiza amin’ity hoe fanjakana tan-dalàna?Rafaly Nd. L’article Tan-dalàna… kolontsaina a été récupéré chez Newsmada.